That's so good, right?: Little Stud Nurse
'လိင်ကိစ္စအတွေ့အကြုံ' ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော့်ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလ မှာ သေသေချာချာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အရင်ကကြုံဖူးတဲ့မဖြစ်စလောက် အထိအတွေ့များနှင့်မတူ ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတွေနှင့် စိတ်ကူးထဲမှာ ပုံရိပ်ပြန်ဖော်လို့ရအောင်ကို ဖြစ်ပျက်ခံစားခဲ့ရတာပါ။
ကြုံတွေ့တယ်ဆိုတဲ့နေ့ဆိုတာ ဆရာဝန်ကြီးက သွေးနမူနာတစ်ခုလိုချင်တယ်ပြောတာကြောင့် သွားပေးတဲ့နေ့ပေါ့။ ဒေါက်တာညီဇော်က ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်ရည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေ စစ်ဆေးပေးပြီးနောက် သူ့သူနာပြုက ကျွန်တော့်သွေးကို ဖောက်ယူလိမ့်မည့် အကြောင်း ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် ရောင်ရမ်းပြီး ထရပ်လိုက်မိတော့ စမ်းသပ်ခုတင်ပေါ်က တွန့်လိပ်နေတဲ့စက္ကူက ကျွန်တော့် ခြေထောက်မှာ ကပ်စီးစီးနဲ့။
'ခဏလေးသည်းခံစောင့်ပါ သားရယ်။ ဆရာအရေးတကြီးသွားစရာရှိလို့ပါ။ ဆရာတပည့် ကျော်ကျော်က အားလုံးဂရုတစိုက်လုပ်ပေးပါ လိမ့်မယ်'
ဧည့်ကြိုက ဒီနေ့ ခပ်စောစောပြန်သွားတယ် ဒီနေ့ကျမှ။ ဒါကြောင့် ဆေးခန်းတစ်ခုလုံး ဘယ်သူမှမရှိတော့သယောင်။ ဆရာဝန်ကြီး ထွက်ခွာကာနီးတော့ ကျော်ကျော်ရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေဟာ စည်းချက်မမှန် ခုန်ခုန်ကျော်နေသလို ခံစားရတယ် သူတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာစဉ်မှာတော့။ သူက ငယ်ရွယ်နုပျိုပြီး တော်တော်သန်မာတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါပဲ။
'အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား ကျော်ကျော်' ဆရာဝန်ကြီးက ကျော့်ကျော်ကိုမေးတော့ သူက 'အိုကေပါတယ်ဆရာ' တဲ့လေ။ သူ့မျက်နှာမှာ ပြောမပြတတ်တဲ့အပြုံးတစ်ခုပေါ်လာပါရဲ့။ အညိုဖျော့ ဆံနွယ်တွေပိုင်ဆိုင်တယ်၊ ဆံပင်ဒီဇိုင်းက ခပ်မိုက်မိုက်၊ ဒါပေမဲ့ သပ်ရပ်သန့်ရှင်း အောင် သူပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ၀တ်နေကျဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားတာအပြာရောင်ရှပ်တစ်ထည်နှင့် အဖြူရောင် ဘောင်းဘီရှည်။ သူ့အသက်က ၂၅နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်။
အရပ်သိပ်မမြင့်ပေမဲ့ တောင့်တင်းသန်မာတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ နည်းနည်းကြောက်သလို စတင်ခံစားရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော်က ဆေးထိုးအပ်တွေကို တော်တော်လန့်တာပဲဗျာ။
'ဒီကောင်လေးကိစ္စပြီးအောင် လုပ်ပြီးမှ တံခါးတွေပိတ် သော့ခတ်ပြီး ပြန်မယ်လေ' ကျော်ကျော်ကဖြေတယ်။ ဒီတော့ ဒေါက်တာညီဇော်က 'good, ကောင်းသောညပါ' လို့ပြောပြီး ပြန်သွားတာ ဆေးခန်းတစ်ခုလုံး ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတော့တယ်။
'မင်းနာမည်က ဘယ်လိုခေါ်လဲ ညီလေး' ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲကိုင်လှုပ်ရမ်းနှုတ်ဆက်ရင်းမေးတယ်။
'မင်းသူ' ကျွန်တော့်နာမည်ကြားတော့လည်း လက်ကိုနည်းနည်း ညှစ်ပြီးမှလွှတ်တယ်။ 'အစ်ကို့နာမည် ကျော်ကျော်ပါ။ တွေ့ရတာဝမ်းသာ ပါတယ်။ အစ်ကိုနဲ့ ဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်ခဲ့ပါလားညီ' ကျွန်တော်လမ်းသွယ်လေးတလျှောက် သူ့နောက်ကနေ လိုက်သွားလိုက်တော့ သတိထားမိတာက လမ်းသွယ်လေးရဲ့ နံရံတွေမှာ ကာလာစုံပန်းချီကားအချို့ချိတ်ဆွဲထားရဲ့။ နောက်က လိုက်သွားတာဆိုတော့ နောက် ထပ် သတိထားမိတာက လုံးကျစ်ပြီး ထွားထွား သူ့တင်ပါးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားနေမှုတွေကိုပါ။ဘောင်းဘီရှည်အဖြူက အားလုံးကို ဖောက်ထွင်း ပြီးမြင်နေရသလိုပဲဗျ။ ခပ်ကြပ်ကြပ် အနက်ရောင်ရေကူးဘောင်းဘီတစ်ထည်နှင့် ထုပ်ပိုးဝတ်ဆင်ထားတာ။ အနက်ရောင် ရေကူး brief ဘောင်းဘီမှာ ကာလာစုံနှင့် တစ်စုံတစ်ခု ရေးဆွဲထားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါနေတယ်။
'ကောင်းပြီ၊ ဟိုက ကုလားထိုင်မှာထိုင်လိုက်ညီ'
ကျော်ကျော်က ပြောတော့ တံခါးမကြီးရဲ့ ဘေးဘက် သိပ်မဝေးတဲ့ ခုံပေါ်ကျွန်တော်ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ဖန်ပုလင်းလေးတစ်ခု၊ ပြီးတော့ တစ်ခါသုံးအပ်အစုံ၊ဆေးထိုးပြွန်တစ်ခုနှင့် ကျွန်တော့်ဘေးမှာ သူထိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်လက်ဖျံတစ်ဖက်ကို လက်တန်းပေါ်တင်ပေးရတာ ပေါ့လေ။
'အင်း...မင်းသူ၊ အားကစားတစ်ခုခုလုပ်သလား' ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို ကွေးကြည့်လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီး သူကမေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် ဘာရယ်မဟုတ် သူ့ပေါင်ကို ငုံ့ကြည့်မိတယ်။ အိုး...သူ့ဘောင်းဘီရှည်ကလည်း ဖောက်ထွင်းမြင်နေရသလားပဲ။ သူ့ပေါင်ခွဆုံက အထုပ် အထည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။ ခပ်ကြပ်ကြပ် ရေကူးဘောင်းဘီနဲ့ထုပ်ပိုးထားတာလေ..ဟိ။
'မကစားဖြစ်ဘူးဗျ' သူ သားရေမျှော့ကြိုးတစ်ခုယူလာပြီး ကျွန်တော့်လက်မောင်းကြွက်သားမှာ စည်းနှောင်လိုက်တယ်။
'မင်းဘောလုံးပွဲကြည့်လား' သူလုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ရင်းမေးတယ်။ 'မကြည့်ဘူးဗျ' သူကျွန်တော့်သွေးကြောကိုရှာပြီးတော့ အရက်ပျံပါ ဂွမ်းလုံးနှင့် ကျွန်တော့်လက်ဖျံကိုပွတ်သပ်တယ်။ 'ရှက်သွားပြီကွာ၊ ဒီနှစ် Liverpool အသင်းတော်တော်ကောင်းတာကွ သူတစ်ခါသုံးအပ် နှင့် ဆေးပြွန်ကအသင့်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်သွေးကြောထဲကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။
'လက်သီးကိုနည်းနည်းတင်းတင်းဆုပ်လိုက်ညီ' သူပြောလည်းပြော သွေးကြောထဲကို အသာဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်သွေးတွေဟာ ဖန်ပြွန်လေးထဲပြည့်နေခဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော် သူ့ပေါင်ခွဆုံကို ပြန်ငုံ့ကြည့်မိပြန်တယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို သတိ ထားမိရတာက သူ့ဘောင်းဘီပေါ်က အရောင်၊ အဲဒါ လစ်ဗာပူးအသင်း လိုဂို ကြိုးကြာနီပုံရိပ်!
'အာ! အစ်ကို့အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်က ဘာပုံလဲဗျ' ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက မထိန်းနိုင်ဘဲ ထွက်သွားတယ်။ ကျော်ကျော်ကျွန်တော့်ကို စူးစိုက်ကြည့်ရဲ့။
'အေး' သူ့မျက်နှာက နည်းနည်းသွေးရောင်သမ်းသွားပြီးမှ ဖြေတယ်။ ပြီးတော့ သူ ကျွန်တော့်လက်မောင်းက အပ်ကိုဆွဲနှုတ်ရော။ ခဏ လေးထိန်းကိုင်ထားပေး သူ ဂွမ်းလုံးအသစ်လေးကို အပ်ပေါက်ရာနားဖိပေးပြီးပြောတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်တာ ပေါ့။ သူ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ ဆေးထိုးပြွန်ကို စတီးခွက်လေးထဲ ထည့်လိုက်ရဲ့။
'မင်း...အဲဒါကို တကယ်မြင်နေရတဟယ်ပေါ့...ဟူး' သူ့ဘာသာငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုပြန်ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများကို စိုက်ကြည့်ပြီး ခဏငြိမ်နေတယ်။ 'မင်းမြင်နေရတဲ့ဟာကို သဘောကျလား'
'ဟုတ်..မိုက်တယ်ဗျ အနက်ရောင်ဘောင်းဘီပေါ်မှာ အနီရဲရဲနှင့်ပေါ်နေတာ' သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားက အပြုံးတစ်ချို့ပေါ်သွားတယ်။ နောက် တော့ သူ့ရှပ်အင်္ကျီကို အပေါ်ပင့်တင်ပြီး ချွတ်ပါတော့တယ်။ ကျစ်လစ်တဲ့ဗိုက်သားပြင်၊ ရင်အုပ်ကနေ ဆီးစပ်အထိဆင်းသွားတဲ့ အမွှေးနု လေးတွေကိုကြွားတယ်။
သူကျွန်တော့်ဆီ နီးကပ်အောင်လျှောက်လာတယ်ဗျ။ 'ဒါတွေကရော အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ စမ်းကြည့်ပါလား' တဲ့ပြောစကားက ဘာ လိုလို။ ကျွန်တော် မလှုပ်မရှားငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေမိဆဲဆိုပေမယ့် မျက်လုံးတွေက သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်က ခုံးထနေတဲ့အကွေ့ အကောက်တွေပါတဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေကို ခဏငေးမိပါတယ်။ ဘာတွေလုပ်မိနေလဲ ကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေ သလဲ မစဉ်းစားမိအောင် ရင်တွေခုန်ပြီး သွေးတွေဆူပွက်နေတယ်ဗျာ။ သူ့ဘောင်းဘီက အမှတ်အသားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမြင်ရ သေးပါ။ သူ့ရှပ်အင်္ကျီကို ကိုင်ထားဆဲ။ တစ်ခြားလက်တစ်ဖက်ကနေ သူ့ဘောင်းဘီကြိုးကိုဖြေလိုက်တာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပုံကျသွားပါ တယ်။ ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေဟာ ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခု စတင်သလိုမြန်လာပြီ။ အင်း....Liverpool Logo ဆိုတာအသေအချာကို ရှိနေတာ ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးမှာ။ အထုပ်အထည်ခပ်ကြီးကြီးကို ဘောင်းဘီက ထိန်းထားတာ၊ နည်းနည်းလေးအောက်ကိုလျောနေတော့ တင်ပါးဆုံနောက်ပိုင်းပုံရိပ်က ဗွီပုံသဏ္ဌာန်ပေါ်နေရော။ ဘောင်းဘီက ခါးမှာတည်းတည်းလေးသာချိတ်ဆွဲထားသလားထင်ရတယ်။ ပြည့် တင်းပြီး ဖောင်းနေတဲ့ ပေါင်တံတွေဟာ အညိုနုရောင်အမွှေးနုလေးတွေနှင့်ဗျ။ ခြေချင်းဝတ်မှာဝတ်ထားတဲ့ဖိနပ်ကို ကန်ချွတ်လိုက်တယ် သူက။
'အစ်ကို့ ဘော်ဒီက မိုက်တယ်နော်' ကျွန်တော် ငကြောင်တစ်ယောက်လိုပြောမိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူ့ငပဲကြီး ထိုးထိုးထောင်ထောင် နှင့် ဖြစ်နေတာကို ကျွန်တော်အခုထိသဲလွန်စတစ်ခုမှမရသေးတာ။ ကျွန်တော့်ကို သူမချိုမချဉ်ပြုံးကြည့်နေဆဲပါ။ နောက်တော့ သူ့ရှပ် အင်္ကျီကို အကုန်ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သူ့ရင်အုပ်တွေက တော်တော်လှတာဗျ။ ကြွက်သားအစိုင်အခဲ၊ ကျစ်လစ်ပြီး ရွှေရောင်ဝင်းနေတာ၊ အညိုနုရောင်အမွှေးနုလေးတွေနှင့် ဖုံးနေရော။
'မင်းထိချင်ကိုင်ချင်ရင် ကိုကြည့်လေ အဲဒါတွေကို' ကျွန်တော့်လက်တွေကိုဆန့်ပြီး သူ့တင်ပါးတွေပေါ်တင်လိုက်တယ်။ ဘောင်းဘီမျှော့ ကြိုးကြားက အကွဲကြောင်းလေးကို မမှီမကမ်းထိကိုင်မိရင်းပေါ့။ အထိအတွေ့နုညံ့မှုက ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပိုမိုထကြွစေသလို သူ့အသား ဆိုင်ကို စထိမိကတည်းက ကျွန်တော့်ညီဘွားက ခေါင်းထောင်ထတော့တာပဲ။ တကယ့် ညင်သာစွာ နုနုညံ့ညံ့ တင်သားတွေကို ပွတ်သပ် ကြည့်မိသလို ဗိုက်သားတွေကို ပွတ်သပ်မိတာ၊ ကြီးမားတဲ့အထုပ်အထည်ဆီမရောက်ခင်အထိလေ။ အဲဒီ့အထဲက ပစ္စည်းက မာထောင်ပြီး ခါရမ်းနေသလိုပဲ။
'Ahh...ကောင်းတယ်ကွာ ဖီလင်က' ကျော်ကျော့်နှုတ်ဖျားက ထွက်လာတာလေ။ ဒီတစ်ခါတော့ သူ့လက်တွေက သူ့တင်ပါးကိုထောက် ထားပြီး ရှေ့ပိုင်းကို ကျွန်တော်နှင့် နီးကပ်အောင်ကော့ပေးတယ်။ ကျွန်တော်မရဲတရဲနှင့် သူ့အထုပ်အထည်ကြီးကို ထိမိတာ ပခြုပ်ထဲက မြွှေကိုထိ မိသလို ခံစားမိရတာပါပဲ။ အသားမြှောင်းကြီးက ခပ်ကြပ်ကြပ် ရေကူးဘောင်းဘီမှာ ကွဲပြဲထွက်လာတော့မယ့်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်နေ အောင် ခေါင်းထောင်ထလာသည့်အပြင် ရွှေဥတွေကလည်း လုံးဝန်းဖောင်းကြွနေရော။
ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲ ကျွန်တော်စဉ်းစားရခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်သွေးစစ်ခန်းဝန်းကျင်ကို ဝေ့၀ဲကြည့်မိတော့ ဘာမှမရှိ ဟင်းလင်းပြင်ထဲ ရောက်နေသလို ခံစားရမိပါတယ်။
ဒီနေရာကို သွေးစစ်ဖို့ရယ် သွေးနမူနာပေးဖို့ရယ်လာတုန်းက ကလေးငယ်တစ်ယောက်လို ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ အခု ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာပဲ စိတ်ကူးယဉ်သမျှဖြစ်လာတာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်လိုဖြစ်ခဲ့ ပြီ။ သေးသွယ်တယ် ထင်ရပေမဲ့ အရမ်းတဲ့ hot သူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်အတွက်အ၀တ်တွေကို ချွတ်ပြနေခြင်း။ ပြီးတော့ သူ့ခန္ဓာ ကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကိုထိကိုင်ခွင့်ပေးနေတယ်လေ။
ကျော်ကျော် ရှေ့ကိုကုန်းလိုက်ရင်း ရေကူးဘောင်းဘီကိုလျောချွတ်လိုက်တယ်။ သူ့ငပဲဟာ မျှော့ကြိုးကနေလွတ်လွတ်ခြင်း ဘွားကနဲပေါ် လာရော။ အသားအပြည့်နှင့် ကျွန်တော့် ပစ္စည်းထက်ကြီးတာ သေချာတယ်။ ငပဲထိပ်က ကွမ်းသီးခေါင်းကလည်း ဖောင်းပြီးကြီးသလို ကိုယ်ထည်ကလည်း တော်တော်တုတ်တယ်။ အညိုနုရောင် အမွှေးနုခြုံပုတ်ငယ်ရှိ ဆီးစပ်ကနေ ခပ်တန်းတန်းတွဲကျနေတာ ရွှေဥနှင့်တွဲ လျက်ပေါ့။ ကျော်ကျော်က သူ့ပစ္စည်းအတွက် အတော်ဂုဏ်ယူတယ်။
'အစ်ကိုတော့ အဲဒါကို ချန်ပီယံကြီးလို့ခေါ်တယ်ကွ' တဲ့သူကကျွန်တော့်မျက်ဝန်းကိုငုံ့ကြည့်ပြီးပြောတယ်လေ။ ကျွန်တော် လေထဲမှာ တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဟာကြီးကနေ မျက်စိမလွှဲထားမိတော့ပါ။
ကျွန်တော် သူ့အတံကြီးကို ဖွဖွကိုင်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းကလွဲရင် အဦးဆုံးထိတွေ့ဖူးတဲ့ တစ်ပါးသူပစ္စည်းပါပဲ။ ထိကိုင်ရတဲ့ ဖီလင်က မိုက်တယ် ပူနွေးပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းထွားနေတဲ့ အရာကြီး။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ထူပူပြီး ဘာဆက် လုပ်နေမိမှန်းမသိတော့ဘူး။ ဒါကြီးကို ကိုင်ကြည့်၊ လျှာလေးနဲ့လျက်ကြည့်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပါးပြင်မှာ တဖတ်ဖတ်ရိုက်ခတ်ကြည့်ချင် လာမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုတွေလုပ်ရမှာကို အသေကြောက်နေမိတာလည်းအမှန်။ လက်ထဲဆုပ်ကိုင်ပြီး သွေးတိုးနေတာကိုပဲ ခံစားနေမိရဲ့။ ပြီးတော့မှ မရဲတရဲ ဖွဖွဆုပ်ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနှောက်ငှင် ကစားတာ ထိပ်အရေပြားလေး ကွမ်းသီးခေါင်းကိုပြန်ဖုံးသွားလိုက် အောက်ကိုလျှော ကျသွားလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။
သူ့ငပဲကိုကိုင်တွယ်ရတာ ရင်ထဲကျေနပ်နှစ်သိမ့်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်သွေးကြောထဲကနေ ရှိန်းတိန်း ဖိန်းတိန်း ခံစားမှုအဟုန်က အခုပဲပေါက်ထွက်တော့မတတ်ပါ။ ကျွန်တော် သူ့ရွှေဥတွေကို လက်နှင့်ပွတ်သပ်ကိုင်ကြည့်သေးတယ်။ ကျွန်တော် သူ့အနားပိုမိုတိုးကပ်မိတော့ ကတိုးဆီအနံ့လိုလို သူသုံးထားတဲ့ရေမွှေးရဲ့ အနံ့က စွဲမက်ဖွယ်ရပါရဲ့။
'အနမ်းပေးပေးကွာ ကိုယ့်ညီလေးကို' ကျော်ကျော်ကပြောတယ်။ ကျွန်တော် ကျော်ကျော့်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ သူ့နီု့သီးခေါင်း လေးတွေကို သူ့ဖာသာပွတ်သပ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ 'အနမ်းတစ်ချက်ပေးကွာ၊ မင်းကြိုက်တယ်မဟုတ်လား အဲဒါလေးကို ဟုတ်တယ် ဟုတ်' ကျွန်တော်ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ် ဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုပေါ့။ 'ဒါဆို အနမ်းတစ်ချက်ပေးပေးကွာ။ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းလေးကိုနော်' ကျွန်တော်ခေါင်းကိုငုံ့ကိုင်းလိုက်ကာ သူ့ငပဲခေါင်းလေးကို နှုတ်ခမ်းအစုံနှင့် တို့ထိလိုက်တယ်ဗျ။ သူ့ငပဲထိပ်ဖျားကနေအရင်းထိ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားအစုံနှင့် အနမ်းပေးမိတာ သူ့ပစ္စည်းကနေ အနံ့တစ်မျိုးရပါရဲ့။ ပြီးတော့ သူ့ငပဲထိပ်ကအပေါက်လေးကနေ precome အချို့နည်းနည်းထွက်နေပါပြီ။ နှုတ်ခမ်းသားလေးနှင့် ခဏပွတ်သပ်ကြည့်ပြီးမှ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်မတ်ပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။
ကျော်ကျော် ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ ခုံရှေ့ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကာ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီဂွဆုံရှိရာဆီရောက်လာပါတယ်။ မင်းဟာလေးကလည်း တကယ့်ကိုမာတောင်နေပြီမဟုတ်လား ဒီထဲမှာ သူက အဲလိုပြောသလို လက်တွေက ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပစ်ရင်း ခြေထောက်ကနေဆွဲချွတ်ပစ်ပါတယ်။ သူ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်တာ မာတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲ ဟာ သူ့မျက်နှာရှေ့ဘွားကနဲပေါ့။ ကျော်ကျော်ခဏတော့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေသေးတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ပါးစပ်ဟာငပဲအောက်ခြေအဆုံးထိ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စုပ်မျိုလိုက်တာ...အား ဘယ်လိုပြောရမလဲ ရေခဲချောင်းကို အားရပါးရစုပ်မျိုလိုက်သလိုပဲ။ ကျွန်တော့်အထင် ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ခပ်ကျယ်ကျယ်လေး အော်ညည်းမိလိုက်တယ်ထင်ရဲ့။ Feel က အရမ်းမိုက်တာကိုး။ ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့သူ့အာခံတွင်း ထဲ အထုတ်အသွင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်တာဗျ။ သူလုပ်နေတာ နည်းနည်းကြာတော့ ကျွန်တော် အာရုံရလာတယ် သိပ်ကြာကြာ မထိန်း နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုလေ။ အဲ... တစ်မိနစ်လောက်မှာ သူ မတ်တပ်ပြန်ရပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျေနပ်သာယာနေတဲ့ ကျွန်တော့်အ ဖို့ အံ့သြ သွားတဲ့မျက်နှာအမူအယာပေါ်သွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်အဖြစ်ကိုသူကြည့်ပြီး ခပ်တိုးတိုးရယ်တယ်လေ။ သူ့ငပဲက ခဏနေကမြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းမာနေဆဲပါ။ သူ့ဖာသာ သူကိုင်ပြီး လှုပ်ရှားလိုက်သေးတယ်။
'မင်း ငါ့ -င်ကိုကြိုက်လား' ကျွန်တော့်ဘက်ကိုကျောပေးပြီး ခေါင်းကတော့ ပြန်စောင်းငဲ့ကြည့်ကာမေးတယ်။ ကြိုက်တယ်၊ ကြိုက်တာပေါ့ ဗျ။ သေးကျဉ်သော သူ့ခါးအစုံကနေ အောက်ပိုင်းကို ဆင်းလာတဲ့တင်သားဆိုင်တွေဟာ ဖောင်းကြွနေတဲ့ ခေါင်းအုံးနှစ်ခုတေ့ဆက်ထား သလိုပဲ မို့မောက်ပြီး နုညံ့နေရော။ 'မင်းထိကိုင်ချင်ရင်ကိုင်ကြည့်လို့ရတယ်နော် ငါ့ကောင်' ဘယ်ငြင်းမလဲ ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ တို့ ထိခံစားကြည့်လိုက်တာပေါ့။ အိုး....ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ပိုမိုမာတောင်လာပြီးရမ်းနေတယ် ကျွန်တော်သူ့တင်သားဆိုင်တွေ ထိကိုင်နေရတာ က အိပ်မက်ထဲမှာ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ကိုင်တွယ်နေရသလို ကျွန်တော့်စိတ်ကြီးဟာ မျောနေတာပေါ့နော်။ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်က စာမျက်နှာ တစ်ခုမှာမြင်ဖူးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံထဲကလို သူ့ တင်ပါးတွေကို ကော့ပေးနေတာဗျ။
'ဒီကိုလာ' သူကပြောပြောဆိုဆို စားပွဲခုံကြီးရှိရာကို လှမ်းသွားတော့ ကျွန်တော်လည်း လျှောကျနေတဲ့ ဘောင်းဘီကို ကောက်ကိုင်ပြီး သူ့ နောက်ကိုလက်သွားလိုက်ပါတယ်။ ကျော်ကျော် စားပွဲခုံကြီးကိုအားပြုကိုင်၊ ခြေနှစ်ဖက်ကို ခပ်ကားကားလုပ်လိုက်တော့ သူ့တင်ပါးအစုံ ဟာ ကျွန်တော်ကြိုက်သလိုကြည့်ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့။
'ကပ်ပြီးကြည့်လေကွာ အဲဒါကိုကြောက်မနေပါနဲ့။ ငါ့တင်ပါးကိုလူတွေ ပွတ်သပ် ကိုင်ရင် အရမ်းသဘောကျတာ' သူ့တင်ပါးကနည်းနည်းတော့ ခပ်ဟဟဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော် သူ့တင်ပါးတွေကို ကိုင်ရတာ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုသိနေသလိုပဲ သူ့နှုတ်ဖျားကနေဆက်မပြောပေမဲ့။
'တင်ပါးတွေကို နည်းနည်းဖြဲပြီး -င်ပေါက်ကိုကြည့်လေကွာ၊မင်းလက်ချောင်းလေးတွေနှင့် တို့ထိကြည့်ဦး' သူပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် လုပ်လိုက်တယ်။ သူ့အပေါက်လေးက ပန်းသွေးရောင်ထနေပြီး အမွှေးအမျှင်လုံးဝမရှိ။ ကျွန်တော် တင်သားဆိုင်အိအိကို အသာဖြဲပြီး တော့ လက်ညှိုးလေးကို အသာအယာဖိပြီးသွင်းလိုက်တယ်။ ကျော်ကျော် နည်းနည်းတွန့်သွားသေတယ်ဗျ။ သူ့ရဲ့မာတောင့်နေတဲ့ငပဲဟာ စားပွဲခုံနှင့် ထိမိနေတော့ သူ စားပွဲပေါ်ကပစ္စည်းပစ္စယတွေကို ဘေးကနေရာလွတ်တဲ့ ခုံတွေပေါ်တင်လိုက်ကာ စားပွဲပေါ်တက် လေးဘက် ထောက်ပြီးကုန်းပေးပါရော။
'မင်းလက်ချောင်းလေးတွေကို ထပ်ထည့်ကွာ.....Oh....ငါ့ကောင့်...ဖီးလ်အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ' ကျွန်တော့်ရဲ့ အဦးဆုံးအကြိမ် လိင်ကိစ္စ ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတော့ ဘာမှန်းလဲမသိ အခုပဲ အိမ်ပြန်ချင်သလို စိတ်ကဖြစ်သွားမိသေးတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို တင်သားဆိုင် တွေရဲ့ကြားအပေါက်ထဲကို အထုတ်အသွင်းပြုရတာ နုညံ့လွန်းပါတယ်။ အား....ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ပေါင်ကြားထဲမှာ မာပြီးရမ်းနေပြီ။ ကျော့်ကျော့်နှုတ်ဖျားက မာန်ဖီသံလိုမျိုး အသံပြုတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ သူ ထရပ်ကာ အောက်ကိုဆင်း အခန်းထောင့်လက်ဆေးကြွေခွက်နား က ဘီရိုလေးဆီသွားရော။
သူ ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးလို ခပ်ကြီးကြီးဘူးတစ်ခုနဲ့ condom အချို့ကိုယူပြီး ပြန်လာတယ်လေ။ ပြီးတော့ စာပွဲ ခုံဆီပြန်သွား ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားပြုကာ 'ဒါကိုနည်းနည်းလောက်ထည့်ပေး' လို့ပြောပြီး သူယူလာတဲ့ဘူးကို လက်ကမ်းပေးတယ်။ 'မင်း ဒစ်ပေါ်လည်းလိမ်း၊ မင်း ဒစ်ကို ငါ့ -င်ထဲမသွင်းချင်ဘူးလား' ကျော်ကျော်ကပြောတာ။ ကျွန်တော်လည်း ရွှဲရွှဲလေးလိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းလိမ်း Gel လိုမဟုတ်ဘူးဗျ အေးမြပြီး ချောကျိကျိနဲ့ စိတ်ပိုပြီးလာစေသလိုပဲ။ ဒီလို Lube ကို ကျွန်တော်လုံးဝမသုံးဖူးခဲ့၊ အမြဲတမ်း -ု ရင် တံတွေးနှင့်ပဲသုံးပြီး -ုခဲ့တာလေ။
'လုပ်လေ ငါ့ကောင်၊ မင်း ဒစ်ကို condom စွပ်ပြီး သွင်းလိုက်တော့၊ ခပ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် အထဲဝင်အောင်ထည့်နော်' ကျွန်တော်ဖြင့် ယုံ တောင်မယုံနိုင်ဘူးကျော်ကျော်က သူ့ -င်ကို ချခွင့်ပေးနေတာဗျ။ သူ့-င်ကလည်း တော်တော်ကောင်းတယ် အနေအထားက။ ဘောင်းဘီ ၀တ်ထားကတဲက တော်တော်ကောင်းတဲ့တင်ပါးတွေလို့ အရင်ခံစားမိစဉ်မှာပဲ ဆုံးဖြတ်မိရတယ်။
ကျွန်တော် မတ်မတ်ရပ် တင်သားတွေကိုဖြဲ အေးအေးသက်သာဖိသွင်းလိုက်တယ်။ နှစ်ဦးသား အပေါက်အလမ်းတည့်အောင် လုပ်ကြခြင်း ပေါ့နော်။ ကျွန်တော် တကယ့်ဖြည်းဖြည်းလေးဖိသွင်းကြည့်ပေမဲ့ သိပ်မ၀င်သလို ခံစားရတော့ နည်းနည်းအားစိုက်ပြီး ဖိသွင်းတယ်ပေါ့။ အိုး...ငပဲထိပ်ပိုင်းကနေ အရင်းထိ ဖိသွင်းလိုက်တာပါ။
'Oh yeah...baby...အားလုံးသွင်းပစ်လိုက်တော့' ကျွန်တော့်ဘက်ကိုခေါင်းငဲ့ကြည့်ရင်း မာန်ပါပါဆိုတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဆုံးထိ ပိုမို ဖိသွင်းလိုက်တာ တစ်ခါမှ မခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဖီလင်ကို ခံစားလိုက်ရတယ်လေ။ ကျွန်တော့်ငပဲလည်း ကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားသလိုပဲ။ ကျော်ကျော့်နှုတ် ဖျားက တအိအိညည်းညူသံလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖီလင်တက်နေတာကျနေတာပဲ။ အစတော့ ကျွန်တော့်မှာ စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ်-ိုးမလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ခရေ၀ထဲ အထုတ်အသွင်းပြုချိန်မှာ စိတ်ကို တခြားပြောင်း ခဏလေးငြိမ် လိုက်တယ်။ ပြီးမှ ပြန်ဆွဲ ထုတ်လိုက် နောက်တစ်ခါ ဖိသွင်းလိုက်နှင့် ကျော်ကျော့် ဖင်ကြီး ကျွန်တော် -ိုးနေတာပါလားဆိုတာကို ဆက် လက်ခံစားဖြစ်ပါရဲ့။
ကျော်ကျော့်နှုတ်ဖျားက 'အား...အ...ငါ့ကောင်...အတွင်းမှာပဲ ပန်းထည့်...ငါ့ဖင်ထဲမှာပဲပန်းထည့်' ပြောတဲ့စကားကြားရတာ ကျွန်တော် မထိန်းနိုင်ဘူးထွက်တော့မယ်ဆိုတာ သူဘယ်လိုများ အာရုံခံစားမိပါလိမ့်လို့တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော် ခပ်သွက်သွက်အားသွန်ခွန်စိုက် ခပ်မြန်မြန်အထုတ်အသွင်းလုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလောက်များတာမထွက်ဘူးသေးတဲ့ သုတ်ရည်တွေကို ပန်းထုတ် လိုက်ပါ၏။ ကျွန်တော့်ငပဲကို လက်နဲ့ဆွဲကိုင်ပြီး အပြင်မထုတ်သေးဘူး။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကျွန်တော့် သုတ်ရည် တွေ...ရှီး...ဖီလင်က အရမ်းမိုက်တာပဲဗျ။
ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် အာရုံပြန်မစူးစိုက်မိသေးခင်မှာပဲ ကျော်ကျော်နှုတ်ဖျားက အားရပါးရအော်ညည်းသံနှင့်အတူ တင်ပါးကို နောက်ပြန် ဖိဖိကစားရင်း ကျွန်တော့်ငပဲကို ပြန်မလွှတ်သေးဘူး။ ကျွန်တော် သူ့ရှေ့ပိုင်းကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မြင်ရတာက စားပွဲ ခုံကြီးရဲ့ ဖြူဖွေးတဲ့ အခင်းပေါ်ကို သူ့သုတ်ရည်တွေနှင့် ဖြန်းပက်နေတာမြင်ရတယ်။ သူ့ငပဲကို သူ့ဖာသာလက်နှင့် ထိမကစားဘဲနဲ့ တောင်ထွက်တာ။ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ခရေကြွက်သားတွေက ဖျစ်ညှစ်ပြီး ကစားနေသေးတာပါ အတန်ကြာအောင်။ သူ့ငပဲက သုတ် ရည်တွေ စားပွဲခင်းပေါ်ဖြန်းတာများ မီးသတ်ပိုက်က ရေတွေပက်ဖျန်းသလိုပါပဲ။
ကျော်ကျော် သူ့ကိစ္စအဆုံးသတ်ပြီး ငြိမ်သွားတော့မှ ကျွန်တော်နောက်ကို အနည်းငယ်ဆုတ်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို ခပ်ဖြေးဖြေး ဆွဲထုတ် ပါတယ်။ သူ လေထဲက အောက်ဆီဂျင်တွေကို စေ့ထားတဲ့သွားကြားကနေ ရှိုက်သွင်းပုံရရဲ့။ ခဏနေမှ သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ကောက်ကိုင်ဆွဲဝတ်တော့တယ်။
'မင်းကောင်းကောင်း -ိုးတတ်တာပဲ' မင်းသူ သူ့ဘောင်းဘီထဲ ငပဲကိုအသာပြန်နေရာချရင်းပြောတယ်။ 'မင်းက တကယ့် perfect patient တစ်ယောက်ပဲ ဟဲဟဲ' ကျွန်တော် ပါးချိုင့်ပေါ်အောင်ပြုံးရယ်မိရင်း ဘောင်းဘီကိုအသေအချာပြန်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခြေထောက် တွေဟာ ညောင်းသလိုဖြစ်ပြီး ဒူးတွေတောင် မခိုင်ချင်တော့သလို ခံစားရတယ်။ သူ့အ၀တ်အစားတွေနေသားတကျပြန်ဝတ် ပစ္စည်းပစ္စယ တွေကို အရင်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရင်း တံခါးမဆီမသွားသေးခင် ကျွန်တော့်အနားကပ်လာပါရဲ့။
'ငါ့အထင်တော့ ဒေါက်တာညီဇော်က နောက်တစ်ပတ်လောက်ကျရင် ညီ့ကို ပြန်ပြီးအဖြေလွှာပေးလိမ့်မယ်' ကျွန်တော့်အနားနီးကပ်စွာရပ် တံခါးလက်ကိုင်ဘုကို လှမ်းကိုင်လိုက် ရင်း ပြောတယ်ကျော်ကျော်က။ သူ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးတယ်နောက်ပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီငုံ့ကိုင်းကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းများကို နမ်း ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်လျှာတွေဟာ သူ့လျှာနွေးနွေးတွေနှင့် ထိခတ်မိသပေါ့။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာက သူ့အနမ်းမခွာမခြင်း ကျွန်တော်တို့ အတန်ကြာငြိမ်သက်နေမိကြပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘယ်ညာယိမ်းထိုးပြီး အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အရာအားလုံးက စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုဆီသို့ခေါ်ဆောင်သွားနေပြီလို့ ခံစားရပါပြီ။ ကျော်ကျော်....ဒီ အမျိုးသားသူနာပြုလေးကို ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ မေ့တော့မည်မဟုတ်ပါ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။
Alex Aung (30-12-2011)
Label: First Time Experience